Iarintsena Ambalavao RN7 Rongony 2 kitapo sarona tanaty taksibrosy
Savorovoro tany Vohemar Jiolahy 6 matin’ny fokonolona
Niaro ny tenany sy ny fananany ny vahoaka. Nandiso ny vaovao niely, omaly, mahakasika ny fitsaram-bahoaka tany Tsarabia, Vohémar ny mpitandro filaminana any an-toerana. Nilaza ireto farany fa fiarovan-tenan’ny mponina no tena marina na “légitime defense”.
Ambolomadinika - Toamasina Tsy lohan’olona fa karandoha no hita ?
«Amin’ny alarobia ho avy izao no hanome ny tohin’ny vaovao izahay mpitandro filaminana mikasika ilay raharaha Ambolomadinika, Toamasina”, hoy ny zandary avy ao amin’ny sampana mpanao fanadihadiana sy famotorana Toamasina, raha nitafa tamin’ny mpanao gazetinay.
Mariazy lasa fisaonana Maty voatsindron’antsy ralehilahy…
Efa eo an-dalam-pisamborana ilay nahavanon-doza an’ilay famonoana lehilahy vao vita mariazy nefa tsy niaina volan-tantely akory ny mpitandro filaminana, raha ny tafa manokan’ny mpanao gazetinay tamin’ny zandarin’ny OPS Bongolava, omaly atoandro.
Fanafihan-dahalo tao Arivonimamo Olona 4 naratra mafy, 9 tapitrisa ariary voaroba
9 tapitrisa ariary no lasan’ireo jiolahy. Olona efatra naratra voafira tamin’ny famaky, 16 ka hatramin’ny 50 taona ireo lasibatra. Ireo no vokatry ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana ny zoma
Faritra Itasy Zokiolona 60 sy 67 taona tratra nivarotra rongony
Antitra vao hiditra am-ponja ! Zokiolona efa enimpolo taona mahery lahy sy vavy no tra-tehaky ny mpitandro filaminana niaraka tamin’ny rongony 2 gony.
TOAMASINA Tsy ampy taona roa tratra nangalatra moto
Ny 14 aogositra lasa teo, tovolahy roa tsy ampy taona no voasambotry ny polisy miasa ao Mangarano Toamasina noho ny halatra moto. Tamin’io andro voalaza io tao anatin’ny faritra
Omby Tazonina ao Antanimeva Morombe Miha mahia fa tsy ampy sakafo sy rano
Miha mahia fa tsy ampy sakafo sy rano ireo ombin’i Jaonary tazomina ao amin’ny toby miaramila ao Antanimeva Morombe, hoy i Mahatratsy Jean havany nampita ny vaovao an-telefaonina taty
Omaly talata 13 aogositra 2019 tamin’ny 8 ora maraina, raha nanao fisafoana teny amin'ny lalam-pirenena faha-7 ireo zandary miasa amin'ny Brigade de police routière (BPR) Fianarantsoa dia nahasarona rongony roa sakaosy milanja 20 kg tao anaty fiaram-pitaterana tao Analalova, kaominina Iarintsena, distrika Ambalavao.
Rehefa natao ny famotorana dia fantatra fa avy any Ihosy no nentina ireo lehilahy roa nitondra azy ka natao ho toy ireny entana tsotra ireny mihitsy. Efa mailo sy kinga anefa ireo zandary mpanao fisafoana ka fantatra avy hatrany fa mampiahiahy ireo entana. Notanana vonjimaika any amponja izy roalahy ireto ary nodorana ny rongony rehefa vita ny taratasy. Tsy mety ritra ny loharanon’ity zavamahadomelina ity eto amin’ny Nosy. Mitaky hetsika savahao sy finiavana politika izany raha hamongotra ny tsy fandriampahalemana fa tsy ampy fotsiny ny fitaovana raitra.